MOV Resizer: Sida loo Resize Quicktime MOV Files
> Resource > Video > Sida loo Resize MOV (QuickTime) Video Files
Waxaa laga yaabaa in aad leedahay badan oo files MOV, sida filimada QuickTime iyo footages camera iwm Tan iyo MOV (QuickTime) size file aad u ballaaran yahay, waxaa laga yaabaa in aad rabto in aad dib isugu habayn size file si ay ugu ekaato qalabka warbaahinta mobile ama meel dheeraad ah Si aad u resize badbaadiyo iwm MOV videos, waxa aad u baahan tahay oo keliya ah resizer MOV fiican caawimaad. Halkan, Wondershare Filmora si weyn lagu talinayaa.
Waxay kuu ogolaanaysaa inaad badalo dhexeeya kala duwan oo caan ah qaabab video, iyo sidoo kale astaysto koobin video sida xal, heerka jir iyo heerka yara iwm Waxaa loola jeedaa inaad size yar resize karaa MOV by diinta qaab kale oo la isku riixo heerka sare, ama hoos xal video, Heerka jir iyo heerka yara. Haddeer macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan Filmora iyo raac tutorial in ay resize aad MOV (QuickTime) files leh saddex tallaabo oo fudud.
MOV Xoog Badane (QuickTime) video resizer: Wondershare Filmora (asal ahaan Wondershare Video Editor)
Si fudud resize aad MOV video tayo waayi maayo;
Habee xal video, heerka yara, heerka jir iyo goobaha kale ee video;
Si toos ah geliyaan video ay u YouTube ama Facebook markii tafatirka loo sameeyo;
1 Import MOV (QuickTime) files si User ee Album
Marka hore, soo dhoofsadaan aad files MOV deegaanka garaacida ah "Import" button on dhinaca kore ee bidix ama jiidayeen files MOV aad rabto in aad ka kombiyuutarka si album Users this app ee '. Dhammaan files keeno muuqan doonaa sida thumbnails in ay leeg- bidix.
2. xiir MOV aan la rabin (QuickTime) video qaybo
Haddii aad rabto in aad ka gooyay clip qaar ka mid ah (dhab ahaantii, waa habka ugu toos ah resize files MOV cabbirka yar), kaliya siday u kala horreeyaan jiidi oo hoos u sareeya oo ka mid ah oo cas Time Tusiyaha in ay bar bilow iyo dhibic afjaridda aad rabto, ka dibna mar kasta ku dhacay "maqas" button baabbi'iyo clip ah.
3. Deji qaab ay wax soo saarka iyo goobaha
Hadda, waxaad u baahan tahay inaad jiidi mid ka mid ah uu doonayay files MOV aad ka album in ay waqtiga MOV resizer ee. Haddii aadan rabin in la sameeyo shaqo kasta tafatirka, kaliya si toos ah riix "Abuur" button, u tag "Qaabka" tab uu furmo suuqa pop-up ka, ka dibna waxay doortaa "MOV" sida qaab wax soo saarka. Ogow in haddii aad rabto in aad resize files MOV by diinta oo ah qaabab kale oo la riixo heerka sare sida FLV, kaliya dooran halkii FLV.
Qeybta hoose ee suuqa kala pop-up wax soo saarka, waxaa jira button xagal-qaab. Just waxa guji inuu sameeyo qaar ka mid ah goobaha sare. Qaadista xal video waa habka ugu wanaagsan ee resize files MOV cabbirka yar. Ma yar oo ku filan? Waxa kale oo aad hoos u dhigi kartaa heerka ay video jir iyo heerka yara.
Video tutorial: Sida loo resize MOV (QuickTime) video